मधेस नयाँ ‘समीकरण’को संघारमा
२०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार ०८:५०:००
उपनिर्वाचनको चटारोसँगै मधेस अहिले एकपटक पुनः नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’को अवस्थामा बिराजमान हुन पुगेको छ । स्वतन्त्र मधेस देशको माग गरी हिजो कुनै न कुनै रूपमा पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय सिके राउतको जनमत पार्टी पनि अहिले उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छ ।
वर्तमानको केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारको प्रयासबाट राजनीतिको मूलधारमा जनमत पार्टीका नामबाट समाहित भएको राउतको पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएपछिको परिणाम कुर्न भने केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ । तर, हाललाई पृथकतावादी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आउनु र त्यसको प्रयोग गर्नुलाई निश्चय पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, यससँगै राउत र उनको पार्टीले राजनीतिमा आफ्नो औचित्य भने साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय हुनु किन आवश्यक थियो र आज निर्वाचनमा सहभागी हुनु किन आवश्यक छ ? निश्चय पनि जनताका लागि यी प्रश्नका उत्तर महत्वपूर्ण छन् ।
राउतको पार्टीले स्पष्ट गरिसकेको छ, अहिले आसन्न उपनिर्वाचनमा संघीय र प्रादेशिक तहमा नभई स्थानीय तहमा मात्र उनको पार्टी सहभागी हुनेछ । मूलधारको राजनीतिमा राउतको सक्रियतासँगै मधेसको विद्यमान राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । हो, ठोस परिणाम र स्पष्ट चित्रका लागि केही समय लाग्न सक्छ, त्यसका लागि त पर्खनैपर्ने हुन्छ । तर, यसपटकको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा राउतको पार्टीको प्रदर्शनले आगामी संसदीय निर्वाचनताका मधेसको राजनीतिको पारो घट्ने वा बढ्ने सम्भावित उपक्रमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
अझ, संघीय सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी र ओली नेतृत्वको संघीय सरकारबीच बिस्तारै तुस विकसित भइरहेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संघीय सरकारसँग नजिक हुन खोजिरहेको वर्तमान अवस्थाले भविष्यमा कस्तो कोल्टे फेर्छ, त्यसले पनि राउतको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने पक्का छ ।
यही पृष्ठभूमिमा मधेसको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य ठानिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन्, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता भने सबै दललाई चाहिएका छन्, यो यथार्थ हो । नेपालको कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेस आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रूपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी (टुटफुटपछि वर्तमानमा अनेक रूपमा अस्तित्वमा रहेका) लगायत परम्परावादी शक्तिका साथै विगतको ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि मूलधारमा आएका तात्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत मधेसकेन्द्रित दल (यी दुवै पार्टीको अहिले पृथक् अस्तित्व छैन) सबैका लागि मधेस यतिखेर क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । यसै श्रेणीमा अब थपिएको छ, जनमत पार्टी ।
तर, सत्य के हो भने मधेसका आकांक्षा अहिले पनि अपूरै छन् । विकास ओरालो लागेको–लाग्यै छ । मानवाधिकारको अवस्था टिठलाग्दो छ । काठमाडौंकेन्द्रित संघीय सत्ता अनुदार देखिएको छ, प्रदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेसकै बासिन्दा छन् । समावेशीका नाममा केही नाम त प्रयोग हुने अवस्था छ, तर अधिकांश भने अझै सम्मानको खोजीमा छन् । राज्यका निकायमा उपस्थिति न्यून छ ।
यस स्थितिलाई केहीले मधेस राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई किंकर्तव्यविमूढताको जामा पहि-याउने गरेका छन् । मधेसमा यस्ता थुप्रै मुद्दा अस्तित्वमा छन् । जे होस्, यी मुद्दाको उपस्थितिमा मधेस यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ, यो सत्य हो ।
मधेसका नाममा चुनावमा सहभागी भएर विजय हासिल गरेको तात्कालीन ‘फोरम’ र ६ वटा राजनीतिक दलको गठबन्धन ‘राजपा’को अहिले प्रदेश २ मा मिलिजुली सरकार क्रियाशील छ । राजनीतिक रूपमा निकै क्रियाशीलजस्तो देखिए पनि उल्लिखित विषयमा यहाँको प्रदेश सरकारले खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन । निश्चय पनि आगामी संसदीय र तथा स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका लागि यी विषय चुनावी मुद्दा बन्नेछन् ।
जनमत पार्टी पनि अपवाद हुन सक्दैन । उसले पनि यो अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गर्नेछ । यसो भयो भने नयाँ राजनीतिक समीकरण अवश्यम्भावी छ र यस अवस्थामा राजनीतिको मूल लाभ कसले प्राप्त गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकीकरण प्रयासलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई एकीकृत रहेको पृष्ठभूमिमा समाजवादी र राजपाबीचको एकीकरणपछि भविष्यमा मधेसका नाममा राजनीति गर्ने एक मात्र जनमत पार्टी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
मधेसमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अवश्यम्भावी छ र यस अवस्थामा राजनीतिको मूल लाभ कसले प्राप्त गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन
यो सत्य हो, मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो प्रमाणित गर्छ । मधेसकेन्द्रित दल पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मत रुझानको आँकलन गर्न सकिन्छ । यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेस कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँगै मिलेर मधेसका मुद्दा समाधान गरून् भन्ने चाहन्छ ।
पछिल्लो संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा पनि स्थान प्राप्तिका दृष्टिले कांग्रेस पछि परेकोजस्तो देखिए पनि लोकप्रिय मतका दृष्टिले कांग्रेसको अवस्था असन्तोषजनक छैन । स्थिति यस्तै रहे आगामी निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादीहरूले आफूले प्राप्त गर्ने मतलाई विजयी ‘सिट’मा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । तर, यो अवस्थाको निर्माण लोकतन्त्रवादीले आफूलाई कुन रूपमा कसरी परिचालित गर्छन्, त्यसमा निर्भर रहने पक्का छ । यसै क्रममा अध्ययन र रोजगारीका सन्दर्भमा अमेरिकामा निकै लामो समय बिताएका सिके राउतको राजनीतिक आदर्श र दृष्टिकोणले पनि त्यतिन्जेल एक आकार ग्रहण गरिसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वामपन्थ र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एक कित्ताको सामिप्य त उनले पनि रोज्नु नै पर्नेछ ।
भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनमा मधेसको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल हो । कांग्रेस र अधिकांश मधेसकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक अवधारणामा विश्वास गर्छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, भोलिका दिनमा मधेसमा कसको कोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? मधेसले यसको आँकलन सम्भवतः गरेको छ । यस्तोमा १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको परिणामले निश्चय पनि केही संकेत गर्नेछ । त्यसो त यस उपनिर्वाचनले मधेसको राजनीतिलाई खासै फरक पार्ने अवस्था छैन, किनभने यहाँ थोरै मात्र स्थानमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर, महोत्तरीको पिपरामा हुने स्थानीय तह प्रमुखको निर्वाचन भने धेरैका लागि भविष्यमा निर्माण हुने रणनीतिको आधार बन्नेमा शंका छैन । यहाँको निर्वाचनमा राउतको पार्टीले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, त्यसले निश्चय पनि भविष्यको राजनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्ने यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
एउटा विषय त निश्चित छ, पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलहरूबीचको नयाँ संरचनाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रभावित गर्नेछ । विगतमा मधेसको राजनीतिमा जोड–घटाउका दृष्टिकोणले एक महत्वपूर्ण खेलाडी मानिँदै आएको तात्कालीन नेकपा (माओवादी) को अहिले स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । यसैगरी मधेसको राजनीतिमा खासै महत्वपूर्ण उपस्थिति नरहेको तात्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग उपेन्द्रको फोरम एकीकृत हुन पुगेको छ ।
जेपी गुप्ताको तराई मधेस राष्ट्रिय (तमरा) अभियानको गति अहिले सुस्तजस्तो देखिएको छ । यस्तै विगतको निर्वाचनमा ‘कोठाबाहिर’ मतदान गर्न स्थानीय मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने राउत अहिले नयाँ पार्टीको कलेबरमा प्रस्तुत भएका छन् । यी केही यस्ता अवस्था हुन्, जसले मधेसको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रभावित गर्ने हैसियत राख्छन् । भविष्यमा यसको परिणाम कस्तो र कुन रूपमा देखिनेछ, त्यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गरौँ ।
#धर्मेन्द्र झा # मधेस # नयाँ ‘समीकरण
नागरिकता विधेयकले मधेसमाथि ठूलो प्रहार भएको सांसद प्रदीप यादवको ठहर
मधेस सन्दर्भमा नेपाली राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया
आफ्ना मुद्दा समावेश गरी संविधान संशोधन अघि बढाउने लबिङमा मधेसकेन्द्रित दल, सभापति देउवासँग गरे छलफल
काठमाडौंमा मधेसी ‘मेनु’
‘ह्याप्पी बर्थडे’ प्रधानमन्त्रीज्यू !